Sales Man (Hlaing Thar Yar Office) | Job in Myanmar ﻿
30.11.2019, Full time , Distribution / Logistic
•	အရောင်း Target များကို ပြည့်မှီမှုရှိအောင် ရောင်းချပေးရမည်
•	Customer ဆိုင်အသစ်များကို အပတ်စဉ်/လစဉ် ရှာနိုင်ရမည်
•	Sales & Marketing အဖွဲ့ နှစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်
•	Customer နှင့် relationship ကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရမည်
•	Market Survey နှင့် Market Saturation Data များကို ကောက်နိုင်ရမည်
•	To collect the sales order form current customer and new outlet.
•	To collect the other competitor information by weekly/monthly.
•	Filling up the data & report the competitor price and news actions, customer's consumption, current using product and their
requirement in customer's profile.
•	To deliver the marketing tools as per the customer requested.
•	To distribute the stocks what the demand of the shop, service center and workshop on time.
•	To prepare daily sales activities report
•	To achieve sales targets as it has been targeted
•	To maintain and checking related using car by daily /weekly/ monthly
•	Can go trip anywhere in Yangon Area.
• တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။(သို့) အတန်းပညာ 10 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
• အသက် (၂၀) မှ (၄၀) အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
• အရောက်းတာဝန်နှင့်လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။
• အလုပ်ချိန်အတွင်း၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက် ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
• FMCGနှင့် စာရေးကရိယာများ အရောင်းအတွေ့ကြုံရှိလျှင်ဦးစားပေးမည် သွက်လက်၍ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူ လုပ်ငန်းတွင်စိတ်ပါဝင်စား၍ ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	Salary 170,000 (+ရက်မှန်ကြေး)We might provide you with uniform
Bonus for target achievement
Work location No.69/70Pyin Si Minn Thar Gyi St, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial City, Yangon,Myanmar.
ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တိုင်ဆင်းရန်၊ မှတ်တိုင်မှဆင်းဆင်းပြီးချင်း ရှေ့သို့ လျောက်ပါ ဝင်ရမည့်လမ်းထိပ်တွင်
DORUE ဆိုင်းဘုတ်ရှိပါသည်၊ လမ်းထဲသို့ ဝင်ရန် နှင့် လမ်းထိပ
Company Industry: Sales Man (Hlaing Thar Yar Office)
Job posted: 30/11/2019
Today , Full time , Distribution / Logistic
FMCG Brand Manager M/F (3)
5 Days, Full time , 800 000 - 1 000 000 Ks, Distribution / Logistic
6 Days, Full time , 800 000 - 1 500 000 Ks, Distribution / Logistic
61 Days, Full time , Distribution / Logistic
370 Days, Full time , 500 000 - 800 000 Ks, Distribution / Logistic
Sales Man Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales Man (Hlaing Thar Yar Office) Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Assistant Tour Operation Manager M/F (1 post)
Assistant F&B Manager (Chaung Tha Beach)
Ayeyarwady Region Today